के तपाइँलाई अनिन्द्राको समस्या छ ? सावधान! मधुमेह पनि हुन सक्छ - Everest Dainik - News from Nepal
के तपाइँलाई अनिन्द्राको समस्या छ ? सावधान! मधुमेह पनि हुन सक्छ
काठमाडौंः अनिन्द्राका कारण शरीरमा कर्टिसोल हर्मोनको उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ । जसले शरीरमा चिनीको मात्रा बढाउने काम गर्छ । त्यसैले राम्रोसँग निद्रा नपर्ने व्यक्ति मधुमेहको जोखिममा हुन्छन् ।
याे पनि पढ्नुस राती निन्द्रा खुल्छ भने यस्तो छ कारण
निद्रा नपरेमा वा पर्याप्त मात्रामा नसुतेमा यसको असर हाम्रो पाचन प्रणाीमा पनि पर्न जान्छ । यसका कारण मानसिक तनाव उत्पन्न भई पाचन प्रक्रियामा पनि धिमा हुने समस्या निम्तिन जान्छ ।
अनिद्राका कारण सम्झने शक्तिमा पनि कमी आउँछ । यसका साथै मानसिक अस्थिरतासमेत निम्त्याउँछ ।
अनिद्राको समस्या बएमा बिहान उठ्दा स्फूर्तिको अनुभूति नहुने, दिनमा निद्रा लाग्ने, काममा मन नजानेलगायत समस्या हुन्छ ।
मौसमले पनि निद्रालाई प्रभावित पार्न सक्छ । गर्मी मौसममा बढी र जाडो मौसममा कम निद्रा लाग्ने हुन सक्छ ।
अनिद्रा र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सबैखाले शारीरिक तथा मानसिक समस्याबाट बच्नका लागि व्यवस्थित जीवनशैली अवलम्बन गर्नुपर्छ । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाठ लिइएको हो ।
ट्याग्स: अनिन्द्रा, मधुमेह